Anaga nagu saabsan/ Aragtida waqfiga
NALAGALA SOO XIDHIIDH
Waqfiga Masjidka Rinkeby waxaa asaasay ururka Muslimiinta reer Järva ee ku yaal xaafadda Rinkeby oo ku taal caasimadda dalka Iswiidhan, Stockholm. Sidoo kale, waqfiga waxaa lagu wareejiyey Masuuliyadda Mashruucii dhismaha Masjidka Rinkeby.
Ujeedada waqfigu waa:
Dhisidda iyo sugidda hawlgalka Masjidka Rinkeby iyo dhismihiisa.
Waxqabadka waqfigu wuxuu u taaganyahay oo uu ka shaqaynayaa sidii uu Muslimuunta ugu suurogalinlahaa gudashada waajibaadkooda diiniga ah iyo ilaalinta dhaqankooda. Islamarakaana waqfigu siyaasad wuu ka madaxbannaanyahay.
Waxqabadka waqfigu wuxuu u furanyahay dhammaan Muslimiinta iyo bulshada inteeda kale oo dhan.
Aragtida waqfigu waa in uu abuuro goob, ay dhallinta, waayeelka, haweenka iyo ragguba ay ku kulmaan maalin kasta. Goob maskaxda iyo caqliga lagu kobciyo, Xarun warbixinno iyo fir fir cooni ay ka jirto si looga hortago caqabadaha bulshada hortaagan.
Waxaan rabnaa in aan dhisno, Masjid iswiidhish ah, oo qaadi-kara mas´uuliyadda dadka iyo deegaanka intaba. Masjid lagu diirinaayo tamarta qoraxda iyo kulaylka dadka.
Shuruk 7:20 am
Maghrib 6:12 pm ---
Isha 7:29 pm ---
Rinkebymoské © 2015. All Rights reserved.